Apple mandefa macOS Big Sur 11.5 beta 2 ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka macOS Big Sur 11.5 beta 2 ho an'ny mpamorona
Roa herinandro taty aoriana Taorian'ny famoahana tampoka ny beta voalohany an'ny macOS 11.5, Apple dia namoaka ny kinova faharoa ho an'ny mpamorona. Raha misoratra anarana amin'ny programa mpamorona ianao dia tokony hiseho tsy ho ela ny OTA ho an'ny macOS Big Sur 11.5 beta 2 fanontana faharoa raha tsy mbola. Azonao atao koa ny misintona ny kinova beta amin'ny Tranokala mpamorona Apple.
Efatra andro taorian'ny nahatongavan'ilay beta 11.5 voalohany dia namoaka ny macOS 11.4 ho an'ny besinimaro i Apple tamin'ny alàlan'ny fanamboarana fiarovana mandritra ny zero andro, ny fanitarana ny fanohanan'ny GPU, ary maro hafa. macOS 11.5 beta 2 dia miaraka amin'ny Manangana isa 20G5033c. Tsy dia nisy fisehoan-javatra vaovao marobe tao amin'ny kinova beta voalohany an'ny macOS 11.5, saingy nahitana fampiasa famantaranandro HomePod vaovao izay hiasa amin'ny app Home ary afaka hahatratra ireo fitaovana Mac sy iOS.
Na dia milaza foana aza izahay fa raha ny amin'ny betas dia tsara kokoa ny mametraka azy ireo amin'ny solosaina faharoa noho izay mety hitranga, dia nasehon'i Apple fa matanjaka tokoa ny betas avoakany. Saingy miresaka iray ho an'ny mpamorona izahay, koa mitandrema amin'izay ataonao. Ho fanampin'izay, tsy nisy zava-dehibe naseho nandritra ny fotoana nilalaovany azy. Amin'izao fotoana izao ny macOS Big Sur 11.5 beta 2 dia beta iray navoaka ho an'ny fanamboarana bibikely sy fanatsarana fototra. Hanohy ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana izahay hahita izay mety ho hitantsika.
Raha mahatsikaritra zavatra mahaliana ianao dia faly izahay ampidirina ato amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny manaraka. Saingy araka ny efa nolazainay, tsy mbola hitantsika izao tsy misy vaovao, mihoatra ny zava-drehetra satria vao tsy ela akory izay no zara raha nampidinintsika tamin'ny fitaovantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Apple dia namoaka macOS Big Sur 11.5 beta 2 ho an'ny mpamorona
Ing. José Luis Fernández dia hoy izy:
Hetsika tena tsara, mpanaraka ny kinova farany aho ary tsy misy zavatra tsy hita!
Valiny tamin'i Ing. José Luis Fernández